အကွှေးဆပျလို၍ မွောကျဒဂုံကဘဏျကို ရုပျရှငျဆနျဆနျ ဓါးပွတိုကျခဲ့ရတဲ့ အဖွဈ - MM Live News
အကြွေးဆပ်လို၍ မြောက်ဒဂုံကဘဏ်ကို ဓါးပြတိုက်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်
၂၀၂၀ ဖေဖဝါရီလ ၁၃ ရက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ် (၃၅) ရပ်ကွက် ငွေပုလဲလမ်းနှင့် လောပိတလမ်းထောင့် ပင်လုံလမ်းနှင့် အဏ္ဏဝါလမ်းထောင့်က CB Bank ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မနက်ပိုင်း ပုံမှန်ဘဏ်ဖွင့်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ လူစိမ်းတစ်ဦးရောက်လာပြီး ….
ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို သေနတ်ပြခြိမ်းခြောက်ကာ ဗုံးလို့ယူဆရတဲ့အရာဝတ္တု ( ၂ ) ခု ကိုလည်းကောင်တာပေါ်တင်ကာ ခပ်တည်တည်ဘဲ ငွေစက္ကူ ၁၀၀၀၀/ိတန် ငွေထုပ် ၆ ထုပ် ( သိန်းပေါင်း ၆၀၀ ) ကိုလုယူသွားတဲ့လုပ်ရပ်က ရုပ်ရှင်ဆန်တယ်လို့ဘဲပြောရမလား ?
ပညာဆန်တယ်လို့ဘဲပြောရမလား ?ထိုင်းကဖြစ်စဉ်တွေကို အတုယူပြီးလက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်လေသလား ဆိုပြီးတွေးမိပါတယ်..ဘဏ်ထဲဝင်ပြီးဓါးမြတိုက်ရဲတဲ့ သတ္တိကတော်ယုံသတ္တိမဟုတ်သလို တော်ယုံအခက်အခဲမဟုတ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရဲတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်..
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေခင်မြာကြောက်လန့်ကြမှာဘဲလေ ၊ ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ( သို့ ) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဗုံးအတုလား ? အစစ်လား ? ၊ လက်နက်အတုလား ? အစစ်လား ? ခွဲခြားသိနိုင်လျှင်တော့ ဆုံဖြတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..
ထိုင်းက ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်နဲ့ ပစ်ခွင့်ပေးထားရင်တော့ သူပစ်ကိုယ်ပစ်ပေါ့..ဗျာ….အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်. ၊
ကြွေးမြီဆိုတာလည်း လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာရှိကြပါတယ် ၊ တစ်ချို့သူဌေးကြီးတွေ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆိုရင် လူတွေမသိမြင်နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်အကြွေးတွေဟာ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးရှိကြပါတယ်.ဘဏ်တွေကနေချေးပြီးသုံးစွဲနေကြတဲ့ ဟန်မပျက်သူဌေးကြီးတွေလဲ ရှိကြပါတယ်..
အခင်းဖြစ်ပြီး ၅ ရက်အကြာမှာ ဖေဖဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၈:၀၀ ချိန်မှာတော့ တရားခံစိုးကျော်ကျော် ( ၄၇ ) နှစ် ( ဘ ) ဦးလှအောင် နေထိုင်တဲ့ အမှတ် ၂၂ ၊ အင်ကြင်းမြိုင်လမ်း ( ၃၃ ) ရပ်ကွက် ( အပေါ်ဆုံးထပ် ) မှာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သူစီးနင်းလာတဲ့ 5K-2831 YGN Probox ကားအဖြူရောင်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းနေအိမ်ထဲကနေအခြားသက်သေခံပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြပါတယ် ။
အဓိကသဲလွန်စကတော့ (,?????????? ) အမည်ရှိ Money Exchange တစ်ခုမှာ ငွေစက္ကူ ၁၀၀၀၀ တန်များနဲ့ US$ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ $ ကိုသွားပြီး လဲလှယ်ခဲ့ရာကနေ သတင်းအရ တာဝန်ရှိမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေက ခြေရာခံရရှိခဲ့ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့စဉ်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ယာဉ်နံပါတ်ပြားအတု CC-9965 AYY အနီကို မြောက်ဒဂုံ ၂၇ ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်လမ်းမဘေး Mega ဆေးကုမ္ပဏီဘေးခြံကွက်တွင် တရားခံမှသိမ်းဆည်းထားသလို အလားတူ နောက်ထပ်သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘောစေ့နှင့်ပစ်ခတ်ရတဲ့ပစ္စတိုသေနတ်ကို ၄၄ ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း အမက ( ၉ ) ကျောင်းရှေ့ ရေမြောင်းအတွင်းမှာဖွက်ထားတာကို လိုက်လံပြသခဲ့ခြင်းကြောင့် သိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ် ။
​နေအိမ်တွင်နောက်ထပ် ဗုံးအတုအသုံးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ကော်ပိုက်များ ၊ တိပ်ခွေများ ၊ သံဖြတ်လွှပါအပါ သိန်း ၆၀၀ အနက်မှ ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ( ၃၇၀ ) ကျပ် ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၇၀၀ ) နှင့်အတူလုယက်ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော Probox အဖြူရောင် 5K- 2831 အဖြူရောင်ယာဉ်ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့ပါတယ် ။
တရားခံဟာ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံအမှတ် (၄၁၄) ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်း ၊ ပုသိမ်မြို့ မှ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ် ( ၃၃) ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ပြီး Red Dot ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ၊
5K-2831 ( Black ) Probox ကားအဖြူရောင်ကိုတစ်လ (၇) သိန်းနဲ့ ဦး??????? ထံမှငှားရမ်းထားတယ်ပြီး အကြွေး ၁၂၂ သိန်းရှိတာကြောင့် ယခုလိုထွက်ပေါက်ရှာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် မိသားစုတစ်စုရဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးဟာ ယခုလို ရာဇဝတ်မှုနဲ့မကင်းတဲ့ ပြစ်မှုအကြီးကြီးနဲ့ဖြေရှင်းတာတော့ အရမ်းမှားပါတယ် ။
(၁) ” ????? ” ဝပ်ရှော့ကိုအကြွေးဆပ် ၂၀ သိန်း
(၂) ” ????? ” အကြွေးဆပ် ၅၀ သိန်း
(၃) ယာဉ်ပိုင်ရှင်???အားယာဉ်ငှားခ ၇ သိန်း
(၄) ယာဉ်ပြင်ဆင်ခ ၃ သိန်း
(၅) ???? ဘဏ်သွင်းငွေ ၅ သိန်း
(၆) ????? ကုမ္ပဏီ Internet သွင်းငွေ ၃၇ သိန်း
စုစုပေါင်း သိန်းပေါင်း (၁၂၂ ) သိန်းဖြစ် ။
ဒီငွေတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာက သက်သေခံအဖြစ် လိုက်လံသိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ပူပေါ် အပူပေါင်းများစွာထပ်ဆင့်သွားပါတယ်..
နောက်ဆုံးတော့ တရားဥပဒေအရ ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကနေ ပ-၃၂၈/ ၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၉၂ နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားလိုက်ပါပြီ…
ကြားထဲကမဆိုင်တဲ့သူတွေ ၊ ယာဉ်နံပါတ်အတုတပ်ဆင်းထားလို့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အစစ်က နေရင်းထိုင်ရင်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံလိုက်ရပါတယ် ….
ဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်း Security တွေမြှင့်နိုင်ဘို့ Push Alarm System / Fire Alarm System တွေအကောင်းဆုံး ရှိရပါတော့မယ်..
အခြားနိုင်ငံမှာတော့ ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘဏ်ဧရိယာအတွင်း ပစ္စတိုသေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးထားသလို ယခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာပါက ပစ်ခတ်ဟန့်တား ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရှိသလို မတော်တဆ ချော်ကာနဖူးမှန်ပြီးသေသွားလည်း အပြစ်မရှိဘူးလို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်..
ဘဏ်ပြင်ပကိုတော့ သေနတ်ယူဆောင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး..ဘာဘဲပြောပြောပါဗျာ…ဘဏ်ဓါးပြတိုက်မှုကြီးကို ၅ ရက်အတွင်းအမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးပေးနိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးနဲ့ တာဝန်သိပြည်သူများကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း…
စည်သူမောင် / Photo Crd
အကွှေးဆပျလို၍ မွောကျဒဂုံကဘဏျကို ဓါးပွတိုကျခဲ့ရတဲ့ အဖွဈ
၂၀၂၀ ဖဖေဝါရီလ ၁၃ ရကျ
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဒဂုံမွောကျပိုငျးမွို့နယျ (၃၅) ရပျကှကျ ငှပေုလဲလမျးနှငျ့ လောပိတလမျးထောငျ့ ပငျလုံလမျးနှငျ့ အဏ်ဏဝါလမျးထောငျ့က CB Bank ကိုပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေဝါရီလ (၇) ရကျနမေ့နကျပိုငျး ပုံမှနျဘဏျဖှငျ့ပွီးမကွာခငျမှာဘဲ လူစိမျးတဈဦးရောကျလာပွီး ….
ဘဏျဝနျထမျးတှကေို သနေတျပွခွိမျးခွောကျကာ ဗုံးလို့ယူဆရတဲ့အရာဝတ်တု ( ၂ ) ခု ကိုလညျးကောငျတာပျေါတငျကာ ခပျတညျတညျဘဲ ငှစေက်ကူ ၁၀၀၀၀/ိတနျ ငှထေုပျ ၆ ထုပျ ( သိနျးပေါငျး ၆၀၀ ) ကိုလုယူသှားတဲ့လုပျရပျက ရုပျရှငျဆနျတယျလို့ဘဲပွောရမလား ?
ပညာဆနျတယျလို့ဘဲပွောရမလား ?ထိုငျးကဖွဈစဉျတှကေို အတုယူပွီးလကျရဲဇကျရဲ လုပျလသေလား ဆိုပွီးတှေးမိပါတယျ..ဘဏျထဲဝငျပွီးဓါးမွတိုကျရဲတဲ့ သတ်တိကတျောယုံသတ်တိမဟုတျသလို တျောယုံအခကျအခဲမဟုတျလို့ ဒီလိုလုပျရဲတာလို့ဆိုနိုငျပါတယျ..
ရုတျတရကျဆိုတော့ဘဏျဝနျထမျးတှခေငျမွာကွောကျလနျ့ကွမှာဘဲလေ ၊ ဒီနရောမှာအတှအေ့ကွုံရငျ့ကကျြတဲ့ လုံခွုံရေးဝနျထမျး ( သို့ ) လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးတဈဦးဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဗုံးအတုလား ? အစဈလား ? ၊ လကျနကျအတုလား ? အစဈလား ? ခှဲခွားသိနိုငျလြှငျတော့ ဆုံဖွတျကတဈမြိုးဖွဈသှားနိုငျပါတယျ..
ထိုငျးက ဘဏျလုံခွုံရေးဝနျထမျးတှလေို လကျနကျကိုငျဆောငျခှငျ့နဲ့ ပဈခှငျ့ပေးထားရငျတော့ သူပဈကိုယျပဈပေါ့..ဗြာ….အခကျအခဲဆိုတာလူတိုငျးမှာရှိကွပါတယျ. ၊
ကွှေးမွီဆိုတာလညျး လူတနျးစားအလှာအသီးသီးမှာရှိကွပါတယျ ၊ တဈခြို့သူဌေးကွီးတှေ လုပျငနျးရှငျကွီးတှဆေိုရငျ လူတှမေသိမွငျနိုငျတဲ့နောကျကှယျအကွှေးတှဟော ဒျေါလာသနျးနဲ့ခြီပွီးရှိကွပါတယျ.ဘဏျတှကေနခြေေးပွီးသုံးစှဲနကွေတဲ့ ဟနျမပကျြသူဌေးကွီးတှလေဲ ရှိကွပါတယျ..
အခငျးဖွဈပွီး ၅ ရကျအကွာမှာ ဖဖေဝါရီလ ၁၁ ရကျနေ့ ညနေ ၁၈:၀၀ ခြိနျမှာတော့ တရားခံစိုးကြျောကြျော ( ၄၇ ) နှဈ ( ဘ ) ဦးလှအောငျ နထေိုငျတဲ့ အမှတျ ၂၂ ၊ အငျကွငျးမွိုငျလမျး ( ၃၃ ) ရပျကှကျ ( အပျေါဆုံးထပျ ) မှာဘဲ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က သူစီးနငျးလာတဲ့ 5K-2831 YGN Probox ကားအဖွူရောငျနဲ့အတူဖမျးဆီးရမိခဲ့ပွီး ၎င်းငျးနအေိမျထဲကနအေခွားသကျသခေံပစ်စညျးမြားကိုသိမျးဆညျးရမိခဲ့ကွပါတယျ ။
အဓိကသဲလှနျစကတော့ (,?????????? ) အမညျရှိ Money Exchange တဈခုမှာ ငှစေက်ကူ ၁၀၀၀၀ တနျမြားနဲ့ US$ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၇၀၀၀ $ ကိုသှားပွီး လဲလှယျခဲ့ရာကနေ သတငျးအရ တာဝနျရှိမှုခငျးရဲတပျဖှဲ့တှကေ ခွရောခံရရှိခဲ့ခွငျးဘဲ ဖွဈပါတယျ..
ပွဈမှုကြူးလှနျခဲ့စဉျက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ယာဉျနံပါတျပွားအတု CC-9965 AYY အနီကို မွောကျဒဂုံ ၂၇ ရပျကှကျ ဘုရငျ့နောငျလမျးမဘေး Mega ဆေးကုမ်ပဏီဘေးခွံကှကျတှငျ တရားခံမှသိမျးဆညျးထားသလို အလားတူ နောကျထပျသူအသုံးပွုခဲ့တဲ့ဘောစနှေ့ငျ့ပဈခတျရတဲ့ပစ်စတိုသနေတျကို ၄၄ ရပျကှကျ ၊ ဗိုလျစိနျမှနျလမျး အမက ( ၉ ) ကြောငျးရှေ့ ရမွေောငျးအတှငျးမှာဖှကျထားတာကို လိုကျလံပွသခဲ့ခွငျးကွောငျ့ သိမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ ။
နအေိမျတှငျနောကျထပျ ဗုံးအတုအသုံးပွုလုပျရာတှငျ အသုံးပွုခဲ့သညျ့ ကျောပိုကျမြား ၊ တိပျခှမြေား ၊ သံဖွတျလှပါအပါ သိနျး ၆၀၀ အနကျမှ ကပျြငှသေိနျးပေါငျး ( ၃၇၀ ) ကပျြ ၊ အမရေိကနျဒျေါလာ ( ၇၀၀ ) နှငျ့အတူလုယကျကြူးလှနျရာတှငျ အသုံးပွုခဲ့သော Probox အဖွူရောငျ 5K- 2831 အဖွူရောငျယာဉျကိုလညျး သိမျးဆညျးရမိ ခဲ့ပါတယျ ။
တရားခံဟာ အနောကျတောငျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ လကျအောကျခံအမှတျ (၄၁၄) ဆကျသှယျရေးတပျရငျး ၊ ပုသိမျမွို့ မှ စဈမှုထမျးဟောငျးတဈဦးဖွဈပွီး မွောကျဒဂုံမွို့နယျ အမှတျ ( ၃၃) ရပျကှကျမှာနထေိုငျပွီး Red Dot ကိုယျစားလှယျတဈဦးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ ၊
5K-2831 ( Black ) Probox ကားအဖွူရောငျကိုတဈလ (၇) သိနျးနဲ့ ဦး??????? ထံမှငှားရမျးထားတယျပွီး အကွှေး ၁၂၂ သိနျးရှိတာကွောငျ့ ယခုလိုထှကျပေါကျရှာခဲ့ခွငျးဖွဈပမေယျ့ မိသားစုတဈစုရဲ့အိမျထောငျဦးစီးဟာ ယခုလို ရာဇဝတျမှုနဲ့မကငျးတဲ့ ပွဈမှုအကွီးကွီးနဲ့ဖွရှေငျးတာတော့ အရမျးမှားပါတယျ ။
(၁) ” ????? ” ဝပျရှော့ကိုအကွှေးဆပျ ၂၀ သိနျး
(၂) ” ????? ” အကွှေးဆပျ ၅၀ သိနျး
(၃) ယာဉျပိုငျရှငျ???အားယာဉျငှားခ ၇ သိနျး
(၄) ယာဉျပွငျဆငျခ ၃ သိနျး
(၅) ???? ဘဏျသှငျးငှေ ၅ သိနျး
(၆) ????? ကုမ်ပဏီ Internet သှငျးငှေ ၃၇ သိနျး
စုစုပေါငျး သိနျးပေါငျး (၁၂၂ ) သိနျးဖွဈ ။
ဒီငှတှေကေိုလညျးသကျဆိုငျရာက သကျသခေံအဖွဈ လိုကျလံသိမျးဆညျးသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တဈပူပျေါ အပူပေါငျးမြားစှာထပျဆငျ့သှားပါတယျ..
နောကျဆုံးတော့ တရားဥပဒအေရ ဒဂုံမွို့နယျရဲစခနျးကနေ ပ-၃၂၈/ ၂၀၂၀ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ-၃၉၂ နဲ့အမှုဖှငျ့အရေးယူထားလိုကျပါပွီ…
ကွားထဲကမဆိုငျတဲ့သူတှေ ၊ ယာဉျနံပါတျအတုတပျဆငျးထားလို့ ယာဉျပိုငျရှငျအစဈက နရေငျးထိုငျရငျး ချေါယူစဈဆေးခံလိုကျရပါတယျ ….
ဘဏျတှအေနနေဲ့လညျး Security တှမွှေငျ့နိုငျဘို့ Push Alarm System / Fire Alarm System တှအေကောငျးဆုံး ရှိရပါတော့မယျ..
အခွားနိုငျငံမှာတော့ ဘဏျလုံခွုံရေးဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ ဘဏျဧရိယာအတှငျး ပစ်စတိုသနေတျကိုငျဆောငျခှငျ့ပေးထားသလို ယခုလိုဖွဈစဉျမြိုးနဲ့ရငျဆိုငျကွုံတှလေ့ာပါက ပဈခတျဟနျ့တား ဖမျးဆီးနိုငျခှငျ့ရှိသလို မတျောတဆ ခြျောကာနဖူးမှနျပွီးသသှေားလညျး အပွဈမရှိဘူးလို့လလေ့ာသိရှိရပါတယျ..
ဘဏျပွငျပကိုတော့ သနေတျယူဆောငျခှငျ့မရှိကွပါဘူး..ဘာဘဲပွောပွောပါဗြာ…ဘဏျဓါးပွတိုကျမှုကွီးကို ၅ ရကျအတှငျးအမွနျဆုံး ဖျောထုတျ ဖမျးဆီးပေးနိုငျကွတဲ့မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူအသီးသီးနဲ့ တာဝနျသိပွညျသူမြားကိုလေးစားဂုဏျယူမိပါကွောငျး…
စညျသူမောငျ / Photo Crd
သံလှငျမွဈအတှငျး မောငျနှမမြားရထေဲမှ ချေါနသေညျဟုဆိုကာ မွဈထဲအတငျးခုနျခသြညျ့ မိနျးကလေး
February 11, 2019 February 11, 2019 MM Live
ဆေးပေါင်းခမည့်အချိန်သည် ည ၈ နာရီ ၄၆ မိနစ် ၃၅ စက္ကန့်
November 22, 2018 MM Live News
အိမ်ခြေ ၁၄၀ အနက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်အိမ်သာရှိသော ရွာကလေး….
April 14, 2019 MM Live